ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ဟောစိလို ကို တူးဖော်ခြင်း
စကား စကား စကားထဲက ဇာတိပြ။
ကိုပေါရယ်... လို့ပဲ တလိုက်မိတော့တယ်.... သူများတွေကို မလေးစားရင်တောင် ကိုယ့်ကို ကိုယ်တော့ လေးစားပါဦး ကိုပေါရယ်...
How you can get degree from YIT. Millions of people are jobless in our country and facing problems in health, education and economic. we should solve these issues. In fact, people in Myanmar want Daw Su's leadership, not democracy. Clear! I think you dont even have common sense.
ကိုပေါခင်ဗျား တော်တော် အိုင်ကျူနိမ့်တာပဲ မထင်ရဘူး
ကိုပေါလဲ...အောက်ကနေ ဟောစိလို ဟောစိလို အလိုက်သင့် ကော့ ကော့ပေးတာပါဘဲ ...
ဟောစိလို မကောင်းတဲ့ ကိုပေါ...
သြော် စရိုက် စရိုက်
အဆင့်ရှိတဲ့ စာပေသမားများ အဲဒီလို ရေးတာ တွေ့ ဘူးကြသလား။
ကိုပေါရယ် ကိုပေါ biography ထဲက အင်ဂျင်နီယာဆိုတာလေးဖြုတ်ပေးပါလားဗျာ၊ အင်ဂျင်နီယာတယောက် ဘလော့မှာ ဒီလိုရေးတယ်ဆိုတာ အင်ဂျင်နီယာတယောက် အနေနဲ့ ရှက်လွန်းလို့ပါဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့ YTU ဆိုတာကြီးလဲ မတက်ခဲ့ရပါဘူး၊ ဆရာကောင်းတွေနဲ့လဲ မကြုံခဲ့ရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ ကောင်းမကောင်း တော်မတော် ဆိုတာကိုတော့ နားလည်ပါသေးတယ်၊ မောင်နဲ့နှမ သားနဲ့အမိဖတ်လို့မှမတော်၊ အပြာရောင် စာအုပ်တအုပ်လောက်မှ ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့ စာမျိုးရေရဲတဲ့ ကိုပေါကိုတော့ အံ့သြတယ်ဗျာ၊ နောက်ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်၊ အင်ဂျင်နီယာတယောက် အနေနဲ့စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး နောက်မရေးပါနဲ့ မတင်ပါနဲ့ဗျာ၊ ....
Tote Gyi said...
Sinceafew months back, I didn't read the mg Paw's articles anymore because no more standard. But I like to read all the sclolding from commentators and having fun with this. hahahahaha... Great! commentators! Cheers!
ကိုပေါတောင် ဒီလို ဖြစ်သွားပြီကိုး
တရွာလုံး မုဒိန်းအကျင့်ခံရတာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်တွေ မင်းကို မုဒိန်းကျင့်တုန်းက မင်းက အောက်ကနေ ဟောစိလို ဟောစိလို (ဟောဒီလို ဟောဒီလို) အလိုက်သင့် ကော့ ကော့ပေးတာကို မြင်ရလို့ ငါက မကျေမချမ်း ဖြစ်နေတာကွ”
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတချို့နဲ့ ဂျာနယ်လစ်အမည်ခံ တတိယ အုပ်စုဝင် အချောင်နှိုက်သမားများဟာ ပြည်သူ့ရှေ့က မားမားမတ်မတ် ရပ်ပြရမယ့်အစား နအဖကို အလိုတူ အလိုပါ “ဟောစိလို ဟောစိလို” အလိုက်သင့် လှုပ်ရှားပေးနေတာ တွေ့မြင်နေရတဲ့အတွက် ပြည်သူတဦးအနေနဲ့ အင်မတန်မှ အော့နှလုံးနာမိပါတော့တယ်။
ဒီကော်မန့် ကို မဖော်ပြချင်လဲနေ..
ကိုယ့်အကြိုက် Selection comments လေးတွေကိုမှ ဖော်ပြပေးတဲ့ ကိုပေါအကြောင်းကို ကော်မန့် ရေးပြီး မဖော်ပြခံရတဲ့သူအတိုင်း သိနေကြပြီ။ ကိုပေါလဲ Anonymous နာမည်နဲ့ကော်မန့် တွေ တင်နေတာ သိတဲ့လူတွေ သိကုန်ကြပြီ။ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေ ကို တုယူရင်လဲ သူလိုလဲ သတ္တိရှိမှပေါ့.. ဟား ဟား
I am sure that story is not your own story..
But if you really think that story you will realize who is right and who is wrong..
If you are in chinese wife situation what will you do?
Nobody help her to escape from that situation and her husband also can not protect her.....
so inated of getting bad geeling in that moment she enjoy her situation ...
Her husband should think for her to console...
ဟုတ်ပါတယ်... တရုတ်ကြီးလို စိတ်တိုနေမယ့် အစား တရုတ်မကြီးလို ကော့ကော့ပေးတာ ခံရသက်သာပါတယ်။
စိတ်ဆိုးနေလို့အကျိုးမရှိဘူး ကိုပေါ... ကော့ကော့ပေးလိုက်။
ဂျပန်ကြီးလည်းကောင်း တရုတ်မကြီးလဲ ကောင်း။
တရုတ်ကြီးကလဲ ငါတောင် သက်သာသေးတယ်လို့ တွေးရင်.. win-win-win situation!
"စိတ်ဆိုးနေလို့အကျိုးမရှိဘူး ... ကော့ကော့ပေးလိုက်။
တရုတ်မကြီးလို ကော့ကော့ပေးတာ ခံရ သက်သာပါတယ်။"
အေး ... အဲဒီ စကားကို
မင်း အစ်မ၊ မင်းညီမ၊ မင်းမိန်းမကို ဂျပန်ကြီးက မုဒိန်းကျင့်တဲ့အခါမှာ သွားပြောပေါ့ကွာ။
ဂျပန်ကြီးလဲ ကောင်း၊ မင်းအစ်မ၊ မင်းညီမလဲ ကောင်း။
မင်းယောက်ဖကလဲ "ငါတောင် သက်သာသေးတယ်" လို့ တွေးရင်.. win-win-win situation!
ဂျပန်ကြီးလဲ ကောင်း၊ မင်းမိန်းမလဲ ကောင်း။
မင်းကလဲ "ငါတောင် သက်သာသေးတယ်" လို့ တွေးရင်.. win-win-win situation!
Paw Gyi Wake up!
Wake up Paw Gyi!
တချို့လူတွေက အဲဒီလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးတာတောင်မှ မမှတ်ကျဘူး ကိုပေါရေ... ကိုရေးစရာရှိတာသာရေးပါ။ ဖတ်ချင်တဲ့သူ လာဖတ်လိမ့်မယ် အခု လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ ဒီလိုရေးတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ...ဆက်သာရေးပါ အားပေးနေပါတယ်...။